कर नतिरी एनसेल बिक्रेतालाई फुत्किन दिएको विषयमा अनुसन्धान गरिने – प्रचण्ड (भिडियोसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
कर नतिरी एनसेल बिक्रेतालाई फुत्किन दिएको विषयमा अनुसन्धान गरिने – प्रचण्ड (भिडियोसहित)
काठमाडौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल कर प्रकरणमा विगतको सरकार र कर्मचारीबाट ठूलो चलखेल भएको बताएका छन् ।
शनिबार राती “जनतासँग प्रधानमन्त्री” कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको मुख्य जोड कर उठाउने तर्फ रहेको बताए । “तर विगतमा बिक्रेता कम्पनीलाई किन फुत्किन दिइयो भन्ने बारेमा पनि छानबीन गरिन्छ” उनले भने, “नेपालको ऐन कानुनले बिक्रेताले लाभ कर तिर्नुपर्छ भनेपनि त्यसलाई किन छूट दिइयो भन्ने विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्छ ।”
सरकारले कर मुक्त गर्न खोजेको प्रचारगलत भएको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, “त्यो कुरा बिल्कुल झूठा हो । कर तिर्नैपर्छ भन्ने हामीले निर्णय गरेका हौं । कर तिर्नु हुँदैन भनेर सरकारले भनेकै छैन ।”
तर अघिल्लो सरकारले एनसेल बिक्रेता कम्पनीलाई कर नतिरी किन जान दियो भन्ने विषयमा गम्भीर षडयन्त्र भएको प्रधानमन्त्रीले बताए । “विगतमा कर तिराउने विषयमा कहाँनेर त्रुटी भयो ? हाम्रो ऐन कानुनले बिक्रेताबाट त्यो लाभ कर उठाउनुपर्छ भनेको छ । बिक्रेताबाट उठाउन छोडेर त्यसलाई फुत्किन कसले दियो ? किन दियो ? त्यसको पनि अनुसन्धान हुनुपर्यो ।” उनले भने ।
सरकारको जोड कर उठाउनेतर्फ भएकोमा उनको जोड थियो । प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, “हामीले कम्पनी बेचेर गएको बिक्रेतासँग मात्रै उठाउने पनि भनेका छैनौं । त्यो उठाउन किन छूट दिइयो ? किन त्यतिबेला उठाइएन भन्ने कुराको पनि अनुसन्धान हुनुपर्यो । सरकारको कुन अधिकारीले, कुन कर्मचारीले या कुन सरकारले चाहिँ लाभकर बिक्रेताबाट उठाउनुपर्नेमा तदारुकता देखाएन भन्ने कुरा छानबीन हुनपर्छ । कर उठाएरै छाड्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । यसभित्रका बिभिन्न खाले चलखेलबारे पनि सरकार गम्भीर छ र त्यसलाई छानबीनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।”
भिडियो हेर्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुस्
ट्याग्स: Ncell Tax dispute, PM Prachand